ပညာ့ဥယျာဉ် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပညာ့ဥယျာဉ် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း
ပညာ့ဥယျာဉ် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း
Posted by ဆူး on Nov 20, 2012 in Creative Writing, Education | 27 comments
ဆူး စိတ်ကူး ပညာ့ဥယျာဉ် ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်း
၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ၁၀တန်းအောင်မြင်ပြီးကတည်းက လသာ၂ ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး နေရာအသီးသီး ဒေသအသီးသီးကို ထွက်ခွာ သွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့ ၉လပိုင်းလောက်မှာ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ နဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်လည် ဆုံဆည်းခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကို ပြန်လည် ဆုံဆည်းစေခဲ့တဲ့ ဆုံမှတ်ဖြစ်တဲ့ နေရာကတော့ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖေ့ဘွတ်မှာပဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း များမှ တဆင့် ပြန်လည် ဆုံတွေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂နှစ်ကျော် ကွဲ ကွာ သွားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းများကလည်း သူတို့လည်း ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘ၀ အတွေ့အကြုံ လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ အသီးသီး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှု အသီးသီးနဲ့ ပြန်လည် ဆုံဆည်းတဲ့ အခါ ရာထူးဥစ္စာ စီးပွား အခြေအနေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ ငယ်စဉ်က သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ကျောင်းသူ ဘ၀ ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နုပျိုပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ငယ်တုန်းက သတိမထားမိခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင် ငယ်သူငယ်ချင်းဟောင်းများနဲ့ ပြန်လည် ဆုံဆည်းတဲ့ အခါမှ ငယ်ငယ်က စိတ်ကို ပြန်လည် ဖမ်းဆုပ်မိခဲ့ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လည် ဆုံဆည်းကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများကလည်း ရန်ကုန်နေ သူငယ်ချင်း အသီးသီး အချိတ်အဆက်ပြုလုပ်ပြီး တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေ ကျင်းပပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးတွေ့ဆုံတဲ့ အခါတိုင်း ပျော်ရွင်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှာ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း သူတို့ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အချင်းချင်း ဆုံဆည်းခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံး ဆုံဆည်းမှု နဲ့ ပျော်ရွင်မှုတွေ တညီတညွတ်တည်း ရရှိတဲ့ စိတ်ကူးလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လည် ဆုံဆည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ် မှတ်တိုင် တခု စိုက်ထူဖို့ပါပဲ။ စားသောက်ပြီး ပျော်ပါးတဲ့ ကုန်ကျငွေ တွေကို မရှိတဲ့ နေရာ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်ကြပါတယ်။ ကျောင်းတော်မှာ အတူတူ ပညာနို့ရည် သောက်စို့ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရတာမို့.. ကျောင်းတော် ရေစက်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးနဲ့ တူတူ ပညာနို့ရည် မသောက်စို့နိုင်ပဲ ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်များကို ပညာနို့ရည် တိုက်ကျွှေးနေတဲ့ ဘကကျောင်း (ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်း) တခုမှာ အလှူ တခု ပြုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ဘက ကျောင်း ကို စုံစမ်း ရှာဖွေ ရင်းနဲ့ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် ပတ္တမြား မြို့သစ် ကုန်းတလဘောင် ကျေးရွာ မှာ ရှိတဲ့ ပညာ့ဥယျဉ် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကျောင်းလေးကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာရင်းနဲ့ ကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိခဲ့ရပါတယ်။ ဘက ကျောင်းကလေး တည်ရှိနေတဲ့ နေရာ ကုန်းတလဘောင် ကျေးရွာ မှာတော့ အ၀န်းအ၀ိုင်း လိုက် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ စုဝေးနေပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းနဲ့ တကျောင်း ခြံစည်းရိုးမရှိ အကာ အရံမရှိ သပ်ယပ် အေးချမ်း စိတ်ငြိမ်စွာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ထို ဘုန်းကြီးကျောင်း နယ်နမိတ်ရဲ့ အပြင်ဘက် မှာတော့ ကျေးရွာတွေ ရှိပါတယ်။ အိမ်ခြေ ၃၀၀၀ လောက် နေထိုင်ကြတယ်လို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ကျေးရွာတွေ ကပ်ရပ် ရှိနေသလို ဆင်းရဲတဲ့ လူမှုဘ၀ ကို ခါးစည်းခံပြီး ဘ၀တွေ ရုန်းကန်နေတဲ့ မိသားစု ဘ၀ တွေ နဲ့ အတူ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ ပညာသင်ချိန်မှာ ပညာသင်ဖို့ ခက်ခဲပြီး မသင်နိုင်ပဲ အိမ်မှာတင် ဆော့ကစား ပေတေနေတာလည်း ဘုန်းဘုန်းများ မြင်သိနေသည့် အားလျှော်စွာ ပညာသင်ပေးပြီး ဘ၀ လမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးပြီး အနာဂါတ် ရတနာလေးတွေ အရောင်ပြောင်လက်စေဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု စတင်ပါတော့တယ်။ ထိုမှတဆင့် စိတ်ကူးလေးများ အကောင်အထည်ဖော်ရင်းဖြင့် ဘက ကျောင်းကလေး ပညာ့ဥယျာဉ် ဘက ကျောင်းကလေး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအနီနားမှာ အစိုးရ ကျောင်း မရှိလို့များလား အစိုးရရဲ့ မူလတန်း ပညာသင်ကြားရေး အခမဲ့တွေ လုပ်နေတာပဲ ဘာဖြစ်လို့ အစိုးရကျောင်း ကို ပေးမထားတာလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ အမေးအလေး ပေါ်လာလို့ မေးမြန်းစူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။ အစိုးရကျောင်း တွေမှာ ကျောင်းအပ်ချိန် အခမဲ့ ဆိုသော်ငြားလည်း အခါအားလျှော်စွာ တိတိ တိတိ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အနည်းအကျဉ်းရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောက် ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ လောက် ပေးရတာကို ဘာလို့များ ကျောင်းထုတ်ပြီး ပညာမဲ့ အဖြစ် ရောက်အောင် လုပ်တာလဲလို့ စိတ်ထဲမှာ ဒွိဟ စိတ်နဲ့ အမေးတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ထိုအရပ်မှာ နေတဲ့ လူတွေ အများစုက လက်လုပ် လက်စား များ ဖြစ်ကြပြီးတော့ မိဘများ နေ့ဘက် အလုပ်သွားတဲ့ အခါ ကလေးများ အိမ်စောင့်ပြီး အိမ်မှာ အကြီးက အငယ်ကို ထိန်းရင်းဖြင့် ဆော့ကစားပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေမိုးချုပ် မိဘများ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံ ကလေး နဲ့ ညစာ ချက်စားကြပြီး တနေ့မှ တနပ် စားကြရပါတယ်။ တခါတရံဆို တနေ့ တနပ်တောင် စားချင်မှ စားရတဲ့ နေ့တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ တနေ့ တနပ် စားပြီး ရှင်သန်နေတဲ့ ဘ၀ကြီးထဲမှာ ကျောင်းထားလို့ ကျောင်းကုန်ကျ စရိတ် အနည်းကိုတောင်မှဖဲ့ပြီး အပိုကုန်ခံနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးကလေးနဲ့အတူ ရင်မောစရာ ဘ၀တွေ ကို တခါမှ မတွေးခဲ့မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အခုမှ ကြားသိရတာတောင် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ် ဆိုတော့ အမြဲ မြင်တွေ့ပြီး ဆင်းရဲခြင်း ကြားမှာ ရုန်းကန်ရင်း ပညာမဲ့ပြီး ရေစုန်မျောတဲ့ ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းရဖို့ သေချာနေတဲ့ အတွက် ဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစာရ မှ ဦးဆောင်ပြီး ပညာ့ဥယျာဉ် ဘကကျောင်းကလေး ကို အစပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘ၀တွေ ငတ်မွတ်ပြီး ဆင်းရဲ နိမ့်ကျတဲ့ အပြင် ပညာပါ ငတ်မွတ်ပြီး ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် ပိုမနက်ရလေအောင် ပညာနို့ရည် တိုက်ကျွှေးပြီး အတွေးအခေါ်ပွင့်လန်းပြီး ဘ၀ လမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ တည်ထောင်ထားတဲ့ ကျောင်းကလေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က စတင်ပြီး တည်ထောင်တဲ့ မူလတန်း ကျောင်းကလေး ကတော့ စာသင်ဆောင်တစ်ခုသာ ရှိပြီး ကလေးအရေအတွက် ၈၀၊ ၉၀ ၀န်းကျင်ခန့် ရှိပါတယ်။ ဆရာမ ၅ဦးနှင့် လည်ပတ်နေပြီးတော့ လစဉ် ဆရာမများကိုလည်း လစာ ပေးပြီး သင်ကြားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလှူခံရတဲ့ ပိုက်ဆံ ငွေကြေးဖြင့် စေတနာ အဓိက ထားပြီး ကလေးများ ဘ၀ ခရီး လျောမွေ့ဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရတာမို့ ရေတိုအဆင်ပြေသော်လည်း ရေရှည် အတွက်တော့ ကလေးများကို စာသင်ပေးနေတဲ့ ဆရာများ အတွက် လစာ ဖန် မတည်ထောင်နိုင်သေးပါဘူး။ တချို့သော ကျောင်းသားများသည် အသက် ၁၂နှစ်လောက် ရှိနေသော်လည်း ယခုစာသင်နှစ်မှ သူငယ်တန်း ပထမတန်း မှာသာ တက်နေတဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘ၀လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးပြီး နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် ရတနာလေးတွေ အရောင်တလက်လက် တောင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက် အပြည့်နဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက် မှာ သူငယ်ချင်းများ သွားရောက် လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် အနည်းအများ စိတ်မထားပဲ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး တူတူ ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။
အလှူငွေ ကောက်ခံ ရရှိမှု စာရင်း ကို အောက်ပါလင့်တွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သာဓု သာဓု သာဓု….
သာဓုက ဘာမှလုပ်လို့ ရဘူး
ငါးကြော်ဝယ်စားမဲ့ပိုက်ဆံ အလှူထဲ လာထည့်ပါ
ဆေးလိပ်လည်း သောက်တုန်း မရှင်းဂန်းလည်း မွှေ့တုန်းလား..
ဟန်းနီးမူး က ပြန်ရောက်ပီလား … ဒါ့ပုံးလေးဘာလေး တင်ပါအုံးဗျ…
ချဉ် အဲ့လေ အားပေးချင်ရို့..
ဟန်းနီမွမ်း မထွက်ရသေးဘူး.. အလှူ ကိစ္စ မပြီးသေးလို့.. မင်္ဂလာဦး အလှူ အနေနဲ့ မတည်ပြီး ဦးဆောင် လုပ်နေတာမို့ စိတ်မဖြောင့်တာနဲ့ အလှူပြီးမှ ထွက်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး မသွားသေးပဲ နေပါကြောင်း။
ဒီတလော ဆူး ပျောက်နေတာ ဒီလို အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ အကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပိုစ်လေး ကို မှတ်တမ်း အနေနဲ့ သိမ်းရအောင် လာတင်သွားတာပါ။
အလုပ်တွေ နှစ်ထပ်ကွမ်း (မင်ဂါဆောင်အတွက်ရယ် အလှူအတွက်ရယ်) ရှုပ်နေတယ်ပေါ့လေ
အပျော်တွေ အမှတ်တရတွေလည်း အထပ်ထပ်ကွမ်း ပြီပေါ့
သာဓုလည်းခေါ် မဆူးတို့ တူနှစ်ဖော် ပြည့်စုံအောင်မြင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို သားသားမီးမီးတွေ အများကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ..
အဲ လောလောဆယ် ဟန်းနီးလည်း အမြန်မွန်းနိုင်ပါစေဗျာ..
လပြည့်နေ့ည ဟန်းနီးမွမ်း ချောင်းသာ သွားမယ်။ လကုန် မွေးနေ့ ဆိုတော့ မွေးနေ့ ကို ဟန်းနီးမွမ်း ခရီးစဉ် အချိန်မှာ ကျော်ဖြတ်မယ်။
လပြည့်နေ့မှာ …. ဥပုသ် စောင့်ရင်း ကုသိုလ် ယူ နိုင်ကြပါစေဗျာ … တိန်
ပြောပါနဲ့ကွယ် ..ကိုရင်တို့က မီးပုံးပျံ အပြိုင်အဆိုင်လွှတ်နေကြတော့
သူလည်း ကြိုးဇားချင်ရှာပေမပေါ့ …ဟီဟိ..
ကောင်းသားပဲ လပြည့်ည ခရီးထွက်မှာ ဆိုတော့.. ကားစီးရင်း ဥပုသ် တရက် ရတာပေါ့ အကြံကောင်းပဲ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ အလှူဒါယိကာမ ရွာတော်ရှင်ရေ
မင်္ဂလာတွေ ရှိပြီးရင်း ရှိအောင် အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါပေတယ်
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျုပ် မောင်ပေ သည်လဲ ၊ မူလတန်းကတဲက ၁၀တန်းအထိ အတူပေါင်းခဲ့သော သူငယ်ချင်းများ နဲ့အတူ ပရဟိတ အဖွဲ့ မှာ ပါဝင်လှူဒါန်းပြီး ကျောင်းဆောင် တစ်ခု ဖြစ်မြောက်ဖို့ဝိုင်းဝန်းနေကြပါတယ်
ကျုပ် လဲ ပို့ စ်တင်ပါဦးမယ်
ရွာတော်ရှင်တို့ လင်မယား ကျန်း၂မာ၂ ချမ်း၂သာ၂ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းသင်းကြရပါစေ
(အပိုဆု) အဟမ်း… သားကောင်းသမီးကောင်း ဘောလုံးတစ်သင်းစာ မွေးကြပါစေဗျား
ကိုယ့်ဆြာ မောင်ပေ အပို ဆုတောင်းလေး တပတ်လောက် လျော့ပါအုန်း။
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေနော်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ် အတွက် မှတ်တမ်း သဘော အနေနဲ့ ပိုစ်တင်ခဲ့တာပါ။
မင်္ဂလာဦးမှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အောင်မြင် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေ
ဘာသာအကျိုး သာသနာအကျိုး ဆထက်ထမ်းပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေရှင်
ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါစေ..
(စားသောက်ပြီး ပျော်ပါးတဲ့ ကုန်ကျငွေ တွေကို မရှိတဲ့ နေရာ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်ကြပါတယ်။)
အဲဒီအိုင်ဒီယာလေး သဘောကျတယ် ဆူးရေ။ :hee:
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုစားသောက်ပျော်ပါးသုံးဖြုန်းတာကို နှမျောပေမယ့်
ဆူးတို့မောင်နှံလည်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာအဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။
အန်တီ မမ သေချာ ဖတ်သွားတယ် ဆိုတာ ယုံလိုက်ပြီ။
ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ မင်္ဂလာဦးအလှူလေးကို သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်..။
မင်္ဂလာဦး အလှူ ကို ကထိန်ခင်းချင်လို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပေါင်း စပ်ပေါင်း ဘက ကျောင်းနဲ့ ကထိန် သွားခင်းမှာပါ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဆူးရေ…။
ဒီလင် ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေလို့
ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်စုံ ချင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာ ဆုတောင်း တင်မလို့ ဟာ .. ကိုယ်က ဓာတ်ပုံ ပဲ ရိုက်တာဆိုတော့ .. ဘယ်ပုံ နဲ့ တွဲတင် ရမလဲ .. စိတ်ကူး ရင်း .စိတ်ကူးရင်း နဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး ….. . . . သား တစ်ရာ၊ မြေးတစ်ဖြာ နဲ့ အသက်ထက်ဆုံး ကျန်းမာရွှင်လန်း ကြပါစေဗျို ……။
ကိုလုလင်လည်း မိသားစု ဖြစ်တော့မှာ ဆိုတော့.. ကျန်းမာပြီး လိမ်မာတဲ့ သားသားလေး ရပါစေ။
မင်္ဂလာဦး အလှူ ကို ကထိန်ခင်း တာရယ်…
သူငယ်ချင်းတွေ စုပေါင်း လို့ ဘက ကျောင်းကို လှူမှာ
ဆိုတာလေး သိရလို့ ပီတိနှင့်အတူ သာဓုခေါ်ပါတယ်…
ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ချင်ပါတယ်။
ပြည့်အောင်လည်း ကြိုးစား အားထုတ်ပါ့မည်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျား ဂေါပကကြီ:ခင်ဗျ နောက်တခါလှူရင်သံချောင်းခေါက်ပါဦးနော့
အလှူကတော့ မနေ့က အောင်မြင် ပျော်ရွင်စွာဖြင့် အထ မြောက်သွားပါတယ်။
အလှူငွေကတော့ စုစုပေါင်း 323550 ကျပ်တိတိ လက်ခံရရှိပါတယ်။
ကထိန်ခင်းတဲ့ ကျောင်းမှာ ဓမ္မာရုံဆောက်လက်စ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဓမ္မာရုံ အတွက် ၃သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ပညာ့ဥယျာဉ် ဘက ကျောင်းမှာလည်း ကလေးတွေ ရေရှည် ပညာသင်စရိတ် နှင့် ဆရာမ တွေ ပုံမှန် လစာ ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ပဒေသာပင် အနေနဲ့ အလှူတော်ငွေ ၁၃၄၇၅၅၀ ကျပ် တိတိ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ကထိန်ခင်းတဲ့ ကျောင်းမှာ ပင့်သံဃာ ၁၅ပါး တပါးကို ၀တ္တုငွေ ၁သောင်းစီ နဲ့ ၁သိန်း၆သောင်း
ဘက ကျောင်းမှာတော့ ကလေးများ အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ ကျောပိုးအိတ် စာအုပ်ခဲတံဘောပင် ကိတ်မုန့် ပဲနို့ စတဲ့ မုန့်တွေ ကို တယောက်ချင်းစီ လက်ရောက်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ကျောင်း အတွက်တော့ ကျောင်းသားကဒ် မရိုက်ရသေးဘူး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျောင်းသားကဒ် နဲ့ စာသင်ခန်း အကြီးကြီးထဲမှာ ၃တန်းလောက် စုသင်ရတာမို့ အခန်းကာတဲ့ ဘုတ်တွေ ရိုက်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဆူး သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ စုပြီး လှူတယ် ဆိုတာ သတင်းကြားပြီး အလှူမခံရပဲနဲ့ စိတ်လို လက်ရ အလှူငွေ ထည့်တဲ့ အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။